ग्रिनकार्ड लगायतका आवेदन फिर्ता हुन नदिन युएससीआईएसले ल्यायो नयाँ टुल - Worldnews.com
आवेदकले गलत शुल्क पठाएका कारण युएससीआईएसले आवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई रोक्न युएससीआईएसले नयाँ टुलको विकाश गरेको छ । अब आवेदकले उक्त टुलमार्फत आफूले फाइल गर्न लागेको आवेदनका लागि लाग्ने उचित शुल्क सहजै थाहा पाउन सक्नेछन् ।
उचित शुल्कको समस्याका कारण आवेदनहरु फिर्ता हुने क्रम कम गर्न नयाँ टुलको
नेपालमा विवाह गर्न इच्छुक अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्ड हुनेले नेपाल सरकारको विवाहसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र विवाह वैधानिक ठहरिनेछ । नेपालमा...
अमेरिकी अध्यागमनले बालविवाह गर्नेका साढे ८ हजार ग्रिनकार्ड स्वीकृत गरेको अमेरिकी सिनेटको समितिको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ । युएससीआईएसले अमेरिकामा रहेका बालबालिकाका...
अमेरिकी नागरिकताको अन्तरवार्तामा चारवटा प्रश्न र तिनका उत्तरहरु बदलिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावका कारण अमेरिकी नागरिकता अन्तरवार्तामा सोधिने ४...
अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसको श्रोतपेज अब नेपालीमा पनि
अमेरिकी सरकारको सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसेज युएससीआईएसले विभिन्न २५ वटा भाषामा निर्माण गरेको श्रोतपेजमा नेपाली भाषापनि समावेश गरेको छ । अब युएससीआईएसको वेवसाइटमा गएर...
डिभी भर्दा अविवाहित भरेर अमेरिका आएँ, अब श्रीमति र छोराछोरीलाई कसरी ल्याउने ?
मैले डिभी लोटरी भर्दा वैवाहिक स्थीति अविवाहित भरेर अमेरिका आएँ । अब मैले मेरा श्रीमति र छोराछोरीलाई कसरी अमेरिका ल्याउने ? तपाईले यदि विवाहित हुँदाहुँदै पनि अविवाहित भनेर आवेदन दिनुभएको छ भने यो तपाईले ढाँट्नुभएको ठहर्छ । त्यसैले विगतमा आफूले ढाँट्नुपर्नाको कारणबारे स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । तपाईले अनुभवप्राप्त कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिएरमात्र यो विषयमा कदम चाल्नुहोला । विगतमा...
अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले फरबरी महिनाका लागि जारी गरेको भिसा बुलेटिनमा एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रिनकार्ड फाइल गर्ने नेपालीहरुका लागि अपडेट प्रदान गरिएको छ । फरबरी महिनामा एक्स्ट्राअर्डिनरी आवेदन आईवान ४० स्वीकृत भइसकेका र १ डिसेम्बर २०१७ भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरुलेमात्र ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै फरबरी महिनामा एक्स्ट्राअर्डिनरी...
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी । उच्च पहाडी जिल्ला म्याग्दीमा विगतको तुलनामा यसवर्ष धानबाली उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । समयमै पानी पर्नु, धान खेतीको क्षेत्रफल विस्तार हुनु, अनुकुल मौसम र उन्नत जातको बिउबिजनका कारणले गर्दा धान उत्पादन बढेको हो । वर्षेबाली अन्तर्गत मकै, कोदोलगायत खाद्यान्न बालीको तुलनामा धानबालीको उत्पादन बढेको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४ हजार १ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान...
एसाइलम स्वीकृत भएको कतिसमय पछि मैले ग्रिनकार्ड पाउनसक्छु ?
एसाइलम स्वीकृत भएको कतिसमय पछि मैले ग्रिनकार्ड पाउनसक्छु ? तपाईको एसाइलम स्वीकृत भएको मितिले एकबर्षपछि तपाईले ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिनसक्नुहुनेछ । तर तपाई भौतिकरुपमा अमेरिकामा एकबर्ष बसेको हुनुपर्छ । यो अवधिमा तपाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्न पनि पाउनुहुन्छ । तर तपाईले नेपालमा आफूलाई ज्यानको खतरा रहेको भन्दै एसाइलम...
सेभेन इलेभेनमा १ सय येनको कप किनेर १५० को कफि पिएको आरोपमा पक्राउ
जापानमा कफि एकदमै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । केही केही कन्भिनियन्स स्टोरले त सम्पूर्ण कफिको मज्जा अन्य पसलमा एउटा कफि पाइने मूल्यमा समेत विक्री गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कन्भिनियन्स स्टोरहरुमा एक सय येनमा समेत कफि पाइन्छ । तपाइले क्याश रेजिष्टरमा गएर आफूले कुन कफि खाने हो त्यसको रकम तिर्नुपर्छ र कप लिएर कफि मेशिनमा गएर भर्नुपर्छ । यहाँ यस्तो किसिमको नियम छ । क्युशुको नाकागावा...
बिहिबार मतदान हुने बिलमा एसाइलमको बार्षिक कोटा १५ हजार, पारित होला त ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थन रहेको बिहिबार अमेरिकी सिनेटमा मतदान हुने बिलमा एसाइलमको बार्षिक कोटा तोकिएको छ । बर्षमा अधिकतम १५ हजारलाई एसाइलम स्वीकृत गर्ने गरी कोटा तोकिएको उक्त बिलमा बार्षिक ५० हजारमात्र एसाइलम आवेदन लिने उल्लेख छ । बिल पारित हुने सम्भावना भने निकै न्यून रहेको छ । मध्य अमेरिकी देशका बालबालिकाहरुलाई अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा...